Ciidamada dowladda oo maalintii labaad howl galo ka wada magaalada Muqdisho – idalenews.com
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maalintii labaad howl galo amaanka lagu sugayo ka wada qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho, iyadoo howl galkan uu daba socdo kuwo maalmihii u dambeeyay laga sameeyay magaalada Muqdisho.
Sida ay sheegayana wararka Ciidamada booliska iyo kuwa Nabadsugida ayaa saaka howl galo kula jarmaaday degmada Hodan oo ka mid ah degmooyinka ugu ballaaran Gobolka Banaadir, waxaana ciidamada ay mid mid u baarayaan guryaha.
Ilaa iyo hada waxaa lagu soo waramayaa in howl galka loo qab qabtay ku dhowaan boqol ruux, kuwaasoo la sheegay in baaritaan lagu kala saarayo lagu sameynayo.
Mid ka mid ah dadka ku dhaqan degmada Hodan ayaa sheegay in saakay ay ku soo tooseen Ciidamada oo taagan irid walba, isla markaana ay su’aalo weydiinayeen, waxaana dadka qaar la weydiinayay aqoonsi.
Shalay ayay aheyd markii Ciidamada howl galo ka sameeyeen degmooyinka Dharkeenley iyo Kaaraan, halkaasoo ay ku soo qab qabteen kooxo la sheegay inay jidgooyooyin dhigteen, isla markaana dareyska ciidamada ay dad ku dhibaateynayeen.
Inkastoo howl galada ay ka soconayaan magaalada, hadana waxaa mararka qaar ka dhacaya dilal qorsheysan iyo qaraxyo, iyadoo habeen ka hor qeybo ka mid ah Muqdisho lagu dilay labo ruux oo mid ka mid ah uu ahaa wiil dhalinyaro ah.
Hey’adaha amaanka dowladda ayaa sheegay in howl galada ay soconayaan tan iyo inta Caasimada amnigeeda la xaqiijinayo, lagana sifeynayo waxa ay ugu yeereen kooxaha nabad diidka ee ku dhuumaaleysanaya.